Madaxweynaha Mareykanka oo jeediyay khudbadiisi Labaad ee sanadlaha ahayd – Walaal24 Newss
Madaxweynaha Maraynkanka Donald Jey Trump ayaa jeediyey khudbaddiisii labaad ee sanadlaha aheyd “State of the Union” taas oo uu looga hadlo xaaladda dalka iyo waxyaabihii u qabsoomay dowladii mudadii ay jirtay.
Madaxweyne Trump ayaa Khudbadiisa waxa uu si gaar ah kaga hadlay dhaqaalaha, arrimaha socdaalka, qoddobka muranku ka taagan yahay ee darbi laga dhiso xuduuda Maraykanka iyo Mexico iyo qoddobo arrimaha dibedda khuseeya sida sababta maamulkiisu u taageerayo hogaamiyaha mucaaradka Venezuela, isagoo si faah faahsan uga hadlay arrimahaasi oo idil.
Trump ayaa hadalkiisa ku bilaabay weedh wax isku soo dhawyneysa isagoo sheegay inuu ajadihiisu yahay mid wadajir ku baaqaysa, ajandaha aan caawa soo qadanaya ma’ahan mid Jamhuuriga, ma’ahan mid Dimuqurrdiyay waa ajande Dadka Mareykanku leeyihiin, isagoo sheegay xaalada wadanku yahay mid adag.
Isagoo ka hadlayay arimaha dhaqaalaha Madaxweyne Trump ayuu sheegay intii mudada xilka hayay arimaha dhaqaalaha guula waaweyn ka keenay, mudadii labada sano kor u dhaafeysay ilaa xiligii doorashada waxaan sameynay koboc dhaqaale horey loo arag waxaan abuurnay 5.3 milyan oo shaqooyin cusub ah, ku waasoo 600 oo kun ah waxay ka mid ahayeen shaqooyinka Warshadaha, arintaasi oo qof walba hore u yiri ma’ahan mid caqliga galeysa.
Dhinaca kale madaxweynaha ayaa ka hadlay dibu habeynta dhanka Cadaalada iyo Xabsiyada Mareykanka, wuxuu sheegay in maamulkiisa ku guuleystay in iyadoo labada Xisbi ay wada socdaan saxiixo sharci lagu magacaabo “first tab Act” ayna wax u tareyso Bulshada Madoow ee Mareykanka.
Qaar ka mid ah siyaasiin u muuqday in ay ku aragti ahaayeen madaxweyne Trump oo hadal jeediyay ayaa in badan ku taageeray dadaalka uu wado madaxweynaha,gaar ahaan xakamaynta soo galootiga,balse waxaa jiray kuwo kale oo si weyn u lafa guray dhibaatada bani’aadanimo ee ka dhalankarta,waxaana jira qoysas badan oo ku dhex lumay xuduudda caruur iyo waalidiintooda.
Donald Trump ayaa soo saaray baaq ku saabsan midnimada iyada oo uu ka digay in “siyaasadda aargoosiga” iyo “baadhitaannada qarsoodiga ah ee qarsoodiga ah” ay ku hanjabeen in ay joojinayaan “mucjisada dhaqaale” ee ka dhacaya Maraykanka.
Madaxwaynaha Maraykanka, isaga oo soo gudbiyay sannadkii labaad ee Xisbiga Midawga Qaran ee fadhigiisu yahay Congress, wuxuu ka codsaday Dimoqraadiyadu in ay gaadhaan heshiis ku saabsan bixinta derbiga la soo jeediyay ee xudduudaha Mexico, isagoo hoos u dhigay hadalkiisa ku saabsan soogalootinimada sharci darrada ah.
Mr Trump ayaa yiri: “Waa in aan dooranno inta udhaxeysa ama weyneyn, natiijooyinka ama iska caabin, aragti ama aargudasho, horumarka aan fiicneyn ama burbur aan la taaban Karin, Caawa, waxaan kaa codsanayaa inaad doorato weynaanteeda.
“Dhibaatadu maaha mid guuleysata xisbigeena, Guusha waa ay ku guuleeysatay dalkayaga, waxaannu isku duubnaa awoodda iskaashiga ah, wada-noolaanshaha iyo wanaagga guud.”
Waxa uu intaa ku daray: “Mucaarad dhaqaale waxay ka dhacaysaa Maraykanka, waxwalba oo joojin kara waa dagaalo nacayb ah, siyaasad, ama baaritaanno qarsoodi ah.
“Haddii ay jirto nabad iyo sharci, ma jiri karto dagaal iyo baaritaan.”
Faallooyinka ayaa ahaa difaaca go’aankiisii ​​ahaa in uu ciidan ka soo baxo Suuriya, iyo in la baadho baaritaanka Robert Mueller, taliyaha khaaska ah oo eegaya in Mr Trump’s 2016-ka madaxweynaha uu ku lug lahaa Ruushka. Dimoqraadiyeyaashu waxay ku fariisteen dhagax dhagax, iyadoo Mr Trump uu racfaan ka qaatay.
Isku dayga madaxweynaha ee ku aaddan inuu ka soo horjeedo dadka kasoo horjeeda ayaa yimid xilli Febraayo 15 oo ah waqtigii loo qabtay in lagu maalgeliyo dowladda Mareykanka. Dimuqraadiyadu waxay diideen codsigiisa $ 5.7 bilyan oo derbiga, iyo xidhitaan kale. Waxay noqon doontaa midka labaad ee isku xigta si dhakhso ah kadib xidhitaankii hore ee 35-maalin, oo sidoo kale lacag badan loogu talagalay derbiga.
Mr Trump wuxuu diiradda saarey meelaha ay labada dhinac isku afgarteen sharciyada mustaqbalka, oo ay ka mid yihiin difaacida shaqooyinka Maraykanka, dib u dhiska kaabayaasha, hoos u dhigida kharashka daawooyinka rijeetooyinka, iyo raadinta siyaasad shisheeye oo “hor istaagaya danaha America”.
Ka hor inta uusan cinwaanka u soo jeedin wuxuu u isticmaali lahaa inuu ku dhawaaqo xaalad degdeg ah, isaga oo u oggolaanaya inuu isticmaalo miisaaniyadda milatariga si uu u bixiyo lacagta derbiga. Si kastaba ha ahaatee, iyada oo qaar ka mid ah mucaaradka Jamhuuriga ah, isagu sidaas ma samayn.
Mr Trump wuxuu yiri: “Waxaan kaa codsanayaa in aan difaacno xuduudaheenna qatarta ah ee koonfurta ka baxsan jacaylka iyo ixtiraamka muwaadiniinta iyo wadankeena.
“Waagii hore, dadka intooda badani qolka dhexdiisa ayaa u codeeyay derbi, laakiin derbigii ku haboonaa ma dhicin, waxaan dhisi doonaa dhismaha. . ”
Mr Trump wuxuu siiyey qayb weyn oo ka mid ah hadalka, kaas oo si fiican u socday saacad, dhaqaalaha, isagoo faahfaahinaya sida uu maamulkiisu u soo bandhigay canshuur dhimista taariikhda gaaban iyo qawaaniinta aan horay loo arag ee shuruucda, waxaana uu abuuray 5.3 milyan oo shaqooyin cusub, oo ay ku jiraan 600,000 oo wax soo saarka.
“Waxaa loo tixgeliyaa meelo badan oo ka fog dhaqaalaha dhaqaalaha ee adduunka oo dhan,” ayuu yiri. “Waxaannu kicinay kacdoon xagga tamarta Maraykanka ah.”
Mid ka mid ah dareenka ugu weyn ee ka soo jeeda Senators iyo xubno ka mid ah Congress-ka ayaa yimid markii uu Maraykanku ugu yeeray inuu yahay kan ugu weyn ee saliida iyo gaaska dabiiciga ah ee adduunka ah, iyo markii ugu horreysay muddo 65 sano ah,
Mid kale ayaa yimid markii Mr. Trump uu sheegay in uu ahaa “naxdin” markii uu ku baaqay in uu qaato bulshadnimada. Waxa uu yiri: “Waxaan ku dhalanay bilaash, waanan sii joogi doonnaa, Caawa, waxaan dib u cusbooneysiinnaa go’aankeena in Maraykanku aanu waligiis noqon wadan wadani ah.”
Qeyb ballaaran oo ka tirsan xisbiyada Dimuqraadiga ayaa ku soo biiray farxad, laakiin tiro yar oo aan tiro yareyn ayaa muujin waayey kala qaybsanaanta garabka bidixda ee xisbiga.
Si kastaba ha ahaatee, markii Mr Trump uu sheegay in 58 boqolkiiba dhammaan shaqooyinka la abuuray sannadkii hore ay buuxiyeen haween, waxaa lagu soo dhaweeyay farxad iyo riwaayad ah “USA, USA” oo ka socda shirwaynaha dimuqraadiga ah ee ku labisan dharka cad ee ciriiriga.
Waxa uu ahaa xilli aan dhif aheyn midnimadii iyadoo dimuqraadiyadu ay inta badan ku fadhiisteen halka Mr Trump uu ku guuleystay guusha maamulka, oo ay ku jiraan qaabka dib u celinta nukliyarka nukliyeerka Iran, iyo iska ilaalinta dagaalka North Korea. Madaxweynaha ayaa ku dhawaaqay inuu qaban doono shir labaad oo uu la yeelan doono Kim Jong-un 27-ka Febraayo 28-keeda ku yaala Vietnam.
Mr Trump wuxuu difaacay go’aankiisa uu kaga tagay ciidamada Mareykanka ee Suuriya, iyo in uu ujeedkiisu yahay Afqaanistaan. Waxa uu yiri: “Quruumaha waaweyn ma dagaalamayaan dagaallo aan dhamaad lahayn.
“Ka dib labaatan sano oo dagaal ah, saacaddu waxay timid ugu yaraan inay isku daydo nabadda, waa waqti.”
Codsi kama dambeys ah oo loogu talagalay midnimada Mr Trump ayaa ku baaqay askar Mareykan ah oo la dagaallamay D-Day.
“Waa maxay sababta ay u sameeyeen? Waxay u sameeyeen Mareykanka, wayna noo sameeyeen,” ayuu yiri. “Waa inaan doorannaa haddii aan ku qeexno khilaafaadkeenna, ama haddii aynu ku dhicin karno inaan ka dhaafno, waa inaan marka hore Maraykanku ku haynaa qalbiyadeenna.”
Isku-dubbarid ku samee waxyaabaha muhiimka ah, laba-maalin-maalin oo ka socda Telegraph oo leh wargeyska bilaashka ah ee bilaashka ah.
Waa maxay jawaab-celinta Mr Trump’s hadalka?
Halkan waxaa ah Nancy Pelosi, oo ah guddoomiyaha Golaha Wakiilada:
Xoghayaha Guud ee Homeland, Kirstjen Nielsen, ayaa yiri: “Shaqaalaha DHS waxay caddeeyeen waxa ay uga baahan yihiin Congresska si ay u soo afjaraan dhibaatada iyo si buuxda u ilaaliyaan xuduudaha, Waqti waa xilliga Guudku aqoonsan yahay xaqiiqooyinka dhulka, dhibaatadanna si dhab ah ayuu u qaadaa. ”
Sida laga soo xigtay polls by CNN, 59 boqolkiiba dadka daawadayaasha ah waxay dareemeen “aad u wanaagsan” oo ku saabsan hadalka Mr Trump. Si kastaba ha ahaatee, inta badan dadkaas ma rumaysnayn in Mr Trump uu ku baaqay in isbahaysigu uu la kulmo guul.
Abrams: ‘Ma doonayo in Trump ku guuldareysto’
Ms Abrams waxay ku dhammaatay hadalkeeda gaaban iyada oo madaxweynuhu dib u cambaareynayo mar kale.
“Sidaa darteed xitaa aniguba aad ayaan uga niyad-jabsanahay habka madaxweynaha ee dhibaatooyinkeena – wali ma rabo inuu ku dhaco,” ayay tiri.
“Laakiin waxaan u baahannahay isaga inuu runta sheego, iyo inuu ixtiraamo waajibaadkiisa iyo kala duwanaanta aan caadiga ahayn ee qeexaya America.”
Jawaabta ugu horreysa ee Ms Abrams ayaa hadalka ka soo baxday. Rick Santorum, oo u ordaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Jamhuuriga ee 2012, ayaa u sheegay CNN: “Madaxweynuhu wuxuu soo bandhigay afar siyaasaddood oo uu ku jiro hadalkiisii ​​oo dhan, Stacey Abrams wuxuu soo bandhigay 40 daqiiqo afar daqiiqo.”
Ra’iisul wasaare Khayre oo magaalada Dhuusamareeb kula kulmay madaxda sare ee Ahlusuna
Wasiirada Maaliyadda iyo Gaashaandhigga Soomaaliya oo ka wada hadlay qorshayaal muhiim u ah horumarinta Ciidanka Xoogga Dalka.
Ciidanka xoogga Dalka oo howlgallo ku khaarijiyay horjoogayaal iyo dagalamayaal ka tirsan Alshabaab
Wasiirka Gaashaan-dhigga oo tababar Ciidanka Xoogga u furay Saraakiil iyo Agaasimeyaal la xiriira Xeerka Anshaxa
Ra’iisul wasaare Khayre oo goor dhow u amba baxay Isutagga Imaaraadka Carabta
Dhageyso: Madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo soo dhaweyay shirka Golaha Amniga Qaranka ee ka furmaya magalada Baydhabo
Dhageyso: Maamulka Degmada Buurdhuubo oo sheegay iney iska caabiyeen weerar kaga yimid Al-shabaab
Dhageyso: Gudoomiyaha Dhuusomareeb ee Ahlu-suna oo ka hadlaya xaalada ay ku sugantahay Degmada……
Daawo: Ra’iisal wasaare Kheyre “sidee baan u noqonaa intaan Caanshuur aruurino Dowlad isku filan aan tuugsan”